Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguSylvia
Wamkelekile eBabalú, indlu ezimeleyo kwigadi yethu eyi-3000mts. Indlu encinci inegumbi lokuhlala elingama-35m kunye nefestile enkulu, eqaqambileyo yokufunda okanye yokusebenza; ejongene negadi, kunye nedama. Ngebhasi ethe ngqo ukuya eMoncloa kwaye uqeqeshe i-10 min ukuhamba. Indlu encinci izolile kwaye inokuthula, izimeleyo, kodwa ayihlukani; ikuvumela ukuba uhlale emaphandleni usebenza eMadrid, okanye ukonwabele ukuthula kunye nendalo. une-terrace yakho kunye ne-pool ehlotyeni.
Indlu encinci intle kakhulu kwaye izolile. Unokonwabela igumbi lokuhlala elibanzi, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela. Ikhitshi inembiza enezinto ezininzi, isitovu sokungeniswa komntu, i-oveni kunye ne-microwave, kunye nomatshini wokuhlamba, zonke zigcinwe kakuhle.
Yindawo yokuhlala. Iivenkile kunye nezothutho 10min ngeenyawo.
Ukuba ufuna ulwazi malunga neevenkile, izicwangciso, indawo yokutyela, ngakumbi iintsuku ezimbalwa zokuqala, ungandibiza kwaye ndiya kukunceda kangangoko kunokwenzeka. Kwakhona kuyo nayiphi na imibuzo malunga nokusebenza kwayo nantoni na endlwini.
Ukuba ufuna ulwazi malunga neevenkile, izicwangciso, indawo yokutyela, ngakumbi iintsuku ezimbalwa zokuqala, ungandibiza kwaye ndiya kukunceda kangangoko kunokwenzeka. Kwakhona kuy…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Torrelodones